> Ukuhlolwa kwefektri ye-Office Depot
Njengomhlinzeki wobungcweti osebenza kahle futhi osebenzisana isikhathi eside, kusamele samukele Ukucwaningwa Kwamafektri kwa-Office Depot, kungumthetho wenkampani, noma ngabe ungumhlinzeki wegolide! njengoba wazi, iHhovisi iDepho yinkampani ephezulu emhlabeni engu-500, inkampani enkulu yamaketanga okuthengisa! Bahlala behlonipha wonke amakhasimende avela kubo, befuna idumela eliphakeme le-Office Depot! Babuye bathengise imikhiqizo eyaziswa kakhulu kubantu ngamunye, ngakho-ke kufanele sibambisane nabo noma nini nanoma yini abafuna ukuyenza!
Ekuqaleni kwale nyanga, sithole umyalezo ovela ku-OD wokuthi bazothumela i-UL ukuthi ibe ne-Audit yasefektri ngalesi sikhathi, kungani basebenzisa i-UL, njengoba wazi, i-UL inomlando omude ekuqinisekisweni nasekuthuthukisweni kwamazinga kubenza babe umcabango othembekile umholi endaweni yokuthobela umthetho Ababambiqhaza bathembela kubo ocwaningweni, olwazini nasezixazululweni zobuchwepheshe ukubhekana nezinkinga zokuphepha nokweluleka ngobuchwepheshe obusha, bazinikele ithimba leGlobal Security kanye neBrand Protection group lisebenzisana neziphathimandla nezinhlangano zamasiko omhlaba ngezindlela zokulwa nomgunyathi. Futhi banikela ngezixazululo zokuhlolwa komhlaba nezitifiketi zokwamukelwa eNyakatho Melika, eLatin America, eYurophu, eMiddle East nase-Asia.
Yize manje kuyisikhathi esiphakeme kakhulu, futhi ulayini wokukhiqiza umatasa kakhulu nsuku zonke, sizothatha isikhathi futhi sibambisane ne-UL ukwenza konke ukucwaningwa kwamabhuku ukuze sikwazi ukunikeza amakhasimende ethu i-OD impendulo enhle, futhi ungalokothi ukhathazeke ngesimo sefektri. futhi bakholelwa singabantu onokwethenjelwa futhi high-idumela OD! Okwamanje silindele ukwakha ubudlelwano obuningi nokubambisana nabangane abasha, noma nini nanoma yini oyidingayo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi, sihlala sikulindile online!